लकडाउनले राजश्व तथा सवारी दुर्घटनामा कमी तर सुरक्षा निकाय भन्छन् लापरवाहीले वर्षेनी दुर्घटना बढ्दो
प्रदेश नं. २ मा हरेक बर्ष सवारी दुर्घटनामा बृद्धि हुँदै आएको छ । प्रदेश नं. २ को ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कले सवारी दुर्घटनामा बृद्धि भएको देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा भएको एक हजार एक सय ५ वटा सवारी दुर्घटनामा तीन सय ९४ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश नम्बर २ का ट्राफिक प्रहरी नायव उपरीक्षक राम बहादुर ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ मा नौ सय १४ वटा सवारी दुर्घटना हुदाँ चार सय ९६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा एक हजार तीन सय ४० वटा सवारी दुर्घटनामा परी ४ सय २० जनाले ज्यान गएको छ । यो संख्या आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को सवारी दुर्घटनामा भन्दा ४६.६० प्रतिशतले बढी रहेको ढकाल बताउँछन् ।
यो बर्ष ६ महिनाको लकडाउनले गर्दा दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेहरुको सङ्ख्यामा १५.३१ प्रतिशतले कमी आएको छ । सर्वसाधारणमा लापर्वाही गर्ने प्रवृतिका कारण दुर्घटनाको संख्यामा बृद्धि हुने गरेको ढकालको भनाई छ । यस चालु आर्थिक वर्षको असोजको दोस्रो सातासम्मको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा ६ सय ७९ वटा दुर्घटना हुदाँ ७१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
यस्तै प्रदेश नं. २ को ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पथलैया बाराका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५ /०७६ मा राजश्रवमा बृद्वि भएपनि हाल आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा लकडाउनले राजश्वमा कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४ /०७५ मा प्रदेश २ का आठ जिल्लाबाट दुई लाख २३ हजार ९ सय ९७ सवारी कारवाहीमा परेका थिए । जसबाट १४ करोड ८३ लाख ६२ हजार राजश्व संकलन भएको छ । भने, आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ मा एक लाख ९२ हजार पाँच सय २६ सवारी साधन कारवाहीमा पर्दा १२ करोड १६ लाख ६८ हजार ५ सय रुपैया राजश्व संकलन गरिएको थियो ।
#सवारी दुर्घटनामा बृद्धि
आइतवार, आश्विन २५, २०७७, ०३:१०:००